४६ वर्षपछि घर फिर्ता
लमजुङको बेसीसहर–२ भकुन्डे खत्रीगाउँका प्रेमबहादुर खडका बेपत्ता भएको ४६ वर्षपछि घर फर्केका छन् । मजदुरी गर्न बाल्यकालमै भारत गएका उनी २४ वर्षको उमेरमा घर आएका थिए । त्यसपछि पुन: भारत गएपछि बेपत्ता भएका थिए ।
सरकारले गाभ्ने निर्णय गरेपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्योलमा परेका छन् । तीनै प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र प्राज्ञसभा सदस्यको कार्यकाल आगामी भदौ २३ गते सकिँदै छ ।
चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगबाट बर्खास्तको सिफारिसमा परेका पदाधिकारीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्रोतसाधन दुरुपयोग गरी आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।
डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएसँगै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
मृगौला तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा चितवन प्रहरीले पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
श्रमस्वीकृति रोकिँदा वर्षौंदेखि विदेशमै
१२ वर्षदेखि कतारमा ऊँट दौडाउँदै आएका सिन्धुलीका ३७ वर्षीय सुदर्शन कार्कीले ५ वर्षदेखि परिवार भेट्न पाएका छैनन् । नेपाल आए पुन: फर्किन नपाउने भएपछि उतै रोकिएका हुन् । नेपाल सरकारले डेढ वर्षअघि घरेलु कामदारलाई श्रमस्वीकृति नदिने निर्णय लिएको छ ।
काठमाडौंका विभिन्न होटलमा प्रबन्धकको जागिर खाँदै आएका विष्णु सतुंगलमा बस्छन् । ‘अस्ट्रेलिया पढ्न जाने भिसा लागेपछि छोरो सुमितको आउँदो शुक्रबार फ्लाइट थियो ।
शिक्षक सेवा आयोगले करिब तेह्र हजार शिक्षकको माग गरेकोमा दुई लाख २५ हजारभन्दा बढी आवेदन परेको छ । आयोगले झण्डै छ वर्षपछि खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्तिको तयारी गरेको हो ।
बुटवल पाल्पा सडक अवरुद्ध
अाइतबार बिहानदेखि परेको वर्षाले पहिरो खस्दा सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल पाल्पा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ ।
दलहरूमा खोइ ३३ प्रतिशत महिला ?
निर्वाचन आयोगले एक महिनाभित्र सबै तहका पार्टी समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन दिएको निर्देशन कुनै पनि राजनीतिक दलले पालना गरेका छैनन् । आयोगले जेठ २३ मा कानुनले तोकेअनुसार संरचना समावेशी बनाउन १२५ दललाई पत्राचार गरेको थियो ।
सूर्योदय नगरपालिकाले विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्न प्रयोगमा ल्याएको विद्युतीय हाजिरी (ई–एटेन्डेन्स) प्रभावकारी देखिएको छ । एसईई नतिजासँगै विद्यार्थी भर्नादरसमेत घटेपछि नगरपालिकाले कार्यालयबाटै विद्यालयका गतिविधि निगरानी गर्न थालेको हो ।
शिक्षा ऐन आठौं संशोधनपछि विद्यालय तहको संरचना परिवर्तन भइसकेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले भने पुरानै संरचनाअनुसार शिक्षक पदपूर्ति गर्न लागेको छ ।
साउदी अरबमा ब्लडमनी (दिया रकम) पाउनुपर्ने झन्डै ५ सय पीडितका परिवारको फाइल नेपाली दूतावासले अगाडि बढाउन सकेको छैन । स्थानीय अदालतमा वकिल नहुँदा दूतावासलाई ती फाइल अगाडि बढाउन कठिनाइ भएको हो ।
रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रममाथि असहमति जनाउँदै १६ सभासदले गाउँसभा बहिष्कार गरे । असहमत पक्षका माग खासै ठूला थिएनन् । गाउँसभामा बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने र कार्यक्रमको पूर्ण विवरण आउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
स्थानीय करमा ‘मनलागी’
कानुनले खानेपानी, औषधि, पुस्तकलगायत अत्यावश्यकीय सेवासुविधामाथि कर लगाउन रोकेको छ । भ्याट पनि केन्द्रीय सरकारले मात्र लगाउन पाउँछ । तर, भक्तपुर र ललितपुरमा स्थानीय तहले खानेपानीमै कर र भ्याट लगाएका छन् । स्थानीय तहबीच नै एउटै सेवा र सुविधाका करका दरसमेत फरक–फरक पाइएका छन् ।
अमृता अनमोल, दुर्गालाल केसी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक वर्षअघि स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति करसम्बन्धी कानुन बनाई साउनबाट अनिवार्य लागू गर्न पत्राचार गर्‍यो । यहाँ विवादका बाबजुद स्थानीय तहले कानुन बनाए । अधिकांशले गाउँ तथा नगरबाट पारितसमेत गरे । तर, असार मसान्त आउनै लाग्दा संघले आर्थिक ऐन संशोधन गरी यसलाई खारेज गरिदियो ।